‘रोस्ट्रममा जान खोज्नु संसदीय मर्यादाविपरीत’-नेम्वाङ- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
‘रोस्ट्रममा जान खोज्नु संसदीय मर्यादाविपरीत’-नेम्वाङ
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी गरे । एमालेले सभामुखले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै संसद् अवरोध जारी राख्ने जनाएको छ ।
एमालेले सभामुखलाई लक्ष्य गरेर लिखित नारा नै तय गरेको छ– ‘पक्षपात पूर्ण व्यवहार मुर्दाबाद’, ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद’, ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’, ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर ।’ यस्तो अवस्थामा सहज ढंगले संसद् चल्ने देखिँदैन ।यसै सन्दर्भमा संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
जनताका जल्दाबल्दा मुद्दामा छलफल हुनुपर्नेमा संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुँगाको लडाइँमा सीमित भएजस्तो छ नि ?
अहिले सभामुखका कारणले अवरोध भएको हो । आश्चर्यको कुरा, यस्तो हुँदा पनि सभामुखले कुनै भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको छैन । समितिको बैठक निरन्तर बस्नुपर्छ, बस्ने गर्थ्यो । समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यस बीचमा विवादास्पद काम भएका छन् । सदनमा बजेट ल्याइयो । दलहरूसँग छलफल नै भएन । यसले पनि विवाद बढायो ।
सभामुखले हामीमाथि भेदभाव गर्नुभयो । हिजोअस्तिको अभ्यासविपरीत काम भयो । सभामुखबाट संसदीय मर्यादा उल्लंघन भयो । संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई अभिन्न अंग मानिन्छ । भेदभावपूर्ण व्यवहार सभामुखबाट भएकाले सदन अवरोध भएको हो ।
संसदीय मर्यादा कायम गर भन्दै बुइँ चढेर सांसदले रोस्ट्रममा उक्लने प्रयास गरे । टाउको फुटाउने योजना थियो भनेर सांसदले अन्तर्वार्ता नै दिए । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यस्तो हुनु राम्रो होइन । यो संसदीय मर्यादाविपरीत हो । त्यसैले आइतबार संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता केपी ओलीले संसद्मा सांसदले देखाउनुपर्ने मर्यादाका बारेमा बताउनुभयो । केही सांसदले गरेको क्रियाकलाप र वक्तव्य दलको कुरा होइन भनेर उहाँले नै भनिसक्नुभएको छ ।
संसद्मा उभिएर सिधै सभामुखको कार्यशैलीविरुद्ध नाराबाजी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? पूर्वसभामुख र संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा यो शैलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
एमाले जहिले पनि कानुनको शासन, मूल्य मान्यताको पक्षमा रहेको पार्टी हो । संसद् पुनःस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय होस् वा अन्य आदेशमा हाम्रो असहमति छ तर पनि निर्णय मान्छौं भनेका छौं । मान्यौं पनि । यो हो, हाम्रो चरित्र ।
एक पक्षका सांसदले अर्को पक्षका सांसदलाई सदनबाट निकाल भनेर माग गर्न मिल्छ ? त्यो त संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र होइन र ?
यो कुनै व्यक्तिसँग केन्द्रित विषयसँग होइन । एमालेले कारबाही गर्न लेखेर दिएपछि सभामुखले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हो । सिफारिसअनुसार १४ जना निष्कासनमा पर्नु भएन । त्यो ठीक निर्णय भएन । ती एमालेका आँखामा संसद्भित्र रहने सांसद होइनन्, संसद्भन्दा बाहिर रहनुपर्ने हो । त्यसैले एमालेले उनीहरूलाई गैरसांसद भनेको हो ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ ०७:०५
कहाँ आशा गर्ने ?
एएफसी वुमेन्स एसियन कप २०२२ छनोट खेल्ने तयारीमा रहेको नेपालले बंगलादेशविरुद्ध दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन । विशेषगरी टिमको आक्रमण भुत्ते खुकुरीजस्तै भयो ।
भाद्र २८, २०७८ राजु घिसिङ
काठमाडौं — अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि देशकै मुख्य थलो दशरथ रंगशालामा ‘डेब्यु’ गर्दा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बंगलादेशविरुद्ध २–१ को संघर्षपूर्ण जित हात पारेको थियो ।
त्यसको तीन दिनपछि आइतबार घरेल टिमले अझै खराब खेल्यो । दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल गोलरहित टुंगियो । समग्रमा दुई खेललाई हेर्ने हो भने नेपालको प्रदर्शन पनि राम्रो भएन । विशेषगरी दोस्रो खेल त नेपालको बंगलादेशविरुद्ध इतिहासकै खराब रह्यो ।
घुँडाको शल्यक्रियापछि दोहामा रिह्याबिलिटेन गरिरहेकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीबिना नेपाली टिमको आक्रमण फिक्काफिक्का रह्यो । प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले उनको अनुपस्थितिमा प्रीति राई, सविता राना, रश्मिकुमारी घिसिङ, विमला चौधरी, अनिता केसीलाई अग्रपंक्तिमा खेलाए । तर कुनै पनि फरवार्डको प्रदर्शनमा खुसी हुने अवस्था छैन । त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? मिडफिल्डले पनि स्ट्राइकरलाई खासै बल उपलब्ध गराउन सकेन । नेपालले आइतबार निश्चित गोलको एउटा पनि अवसर सिर्जना गर्न सकेन । अर्कोतिर, पाहुना टिमले नेपाली डिफेन्सलाई बारम्बार दुःख दियो । विगतमा एकतर्फी दबाबमा राखेको टिमविरुद्ध घरेलु मैदानमा रक्षापंक्तिको राम्रै परीक्षा लियो । गीता राना, अमृता जैसी र पूजा रानाले राम्रै प्रदर्शन गरे ।
पहिलो खेलमार्फत सविता, प्रीति, सिर्जना सिंह र रश्मिले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यु गरे । सविता र प्रीतिले सिनियर टिमबाट खेलेको पहिलो खेलमै गोल गरेर केही आशा देखाएका थिए । दोस्रोमा त्यस्तो आशा गर्ने ठाउँ पनि रहेन । आक्रामक मिडफिल्डको भूमिकामा प्रीति दबाबमा देखिइन् । उनको स्थान लिँदै रजनी थोकरले ८९ औं मिनेटमा सिनियर टिममा डेब्यु गरिन् । अब यो टिमका डिफेन्स निशा थोकर र विमला विक तथा तेस्रो रोजाइकी गोलकिपर उषा नाथले डेब्यु गर्न बाँकी रह्यो ।
प्रशिक्षक फिलिप्सले बिहीबार जित हात पारेको टिमको पहिलो रोजाइमा तीन खेलाडी परिवर्तन गर्दै नेपाली टिमलाई दशरथ रंगशालामा उतारेका थिए । उनले गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको स्थानमा अञ्जना रानामगरलाई गोलपोस्टको जिम्मेवारी दिए । मिडफिल्डमा मञ्जलीकुमारी योञ्जनको स्थानमा अनिता बस्नेतलाई ल्याए । अग्रपंक्तिमा सवितालाई ‘बेन्च’ मा राख्दै रश्मिलाई अवसर दिइएको थियो । पहिलो रोजाइमा परिवर्तनको असर मैदानमा देखिएन । दोस्रो हाफमा सविता, अनिता केसी र रजनीलाई ल्याइए पनि घरेलु टिमको खेलमा कुनै सुधार भएन ।
बंगलादेशले गोलको प्रयास गरिरहँदा सेन्टर–ब्याक गीताको प्रदर्शन राम्रो दखियो । उनले नवौं मिनेटमै अञ्जनाको गल्तीमा श्रीमोती सरकारले खाली पोस्टमा प्रहार गर्न लागेको बल खोस्दै नेपालको संकट टारेकी थिइन् । उनले मोसम्मत सोपनाले पोस्टमा गोलकिपरमात्रै रहेको अवस्थामा २३ औं मिनेटमा अगाडि बढाइरहेको बल पनि खोसेकी थिइन् । पूजाले पनि दुईपल्ट सही ट्याकल गरिन् ।
मिडफिल्डमा कप्तान रेनुका नगरकोटे र सरु लिम्बूको प्रदर्शन केही आशा गर्न सकिने देखियो । पहिलो हाफमा सरुले तीनपल्ट अवसर पाएकी थिइन् । उनले दसौं मिनेटमा पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाटै गरेको प्रहार गोलकिपर रूपनाचक्माले राम्रो बचाउ गरिन् । उनले ११ औं मिनेटमा गरेको प्रहार भने फितलो रह्यो । अगाडि गोलकिपरमात्रै रहँदा २० औं मिनेटमा अघि बढेकी उनीविरुद्ध मसुरा परविनले आकर्षक ट्याकल गर्दै बल क्लियर गरिदिइन् ।
बंगलादेशको गोलको प्रयासमा अमृताको प्रदर्शन पनि राम्रो रह्यो । श्रीमोतीले २९ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बल बारमा लाग्दै बाहिरियो । विमला चौधरीले ४३ औं मिनेटमा पोस्टमा गोलकिपरमात्रै रहेको अवस्थामा पाएको बल प्रहार गर्न ढिलाइ गरिन् । केही पछि उनले प्रहार गरेको बललाई डिफेन्सले रोकिदिए । दोस्रो हाफ नीरस रह्यो । दुवै टिमले उल्लेख गर्न लायक आक्रमण गरेनन् ।
सिनियर टिमको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टिम बंगलादेशविरुद्ध आठौं खेलसम्म अपराजित छ । तर प्रदर्शन भने खस्किँदै गएको छ । बंगलादेशले सुधारिएको प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यसैले त उसले आठ भेटमा दोस्रोपल्ट बराबरी गर्‍यो, त्यो पनि नेपालमै । ठीक उल्टो नेपाली टिमको प्रदर्शन भने खस्किँदै गएको मैत्रीपूर्ण खेलका नतिजाले सावित गर्‍यो । यस्तो प्रदर्शनले अर्को साता उज्वेकिस्तानमा हुने एएफसी एसियन कप २०२२ छनोटमा नेपाललाई फाइदा गर्ने छैन । फिटनेस, गति र रणनीतिक हिसाबले पनि नेपाली खेलाडीलाई माथिल्लोस्तरका फिलिपिन्स र हङकङविरुद्ध टिक्नै गाह्रो पर्न सक्छ ।
छनोटमा सुधार गर्ने वाचा
‘प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो । तर यसले एसियन कप छनोटमा फाइदा गर्नेछ,’ अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक फिलिप्सले भने, ‘यो मैत्रीपूर्ण खेल हो । फिटनेसमा दिनदिनै रामे भइरहेको छ । प्रतियोगितामा फिटनेस र ट्याक्टिस फरक स्तरको हुन्छ । अर्को साता (एसियन कप छनोटमा) समूहमा शीर्षस्थानमा रहने प्रयास गर्नेछौं ।’
कप्तान रेनुकाले विदेशी प्रशिक्षकको अमागनसँगै रणनीति परिवर्तन भएको र यस्तोमा टिमको समन्वय मिलाउन संघर्ष गरिरहेको बताइन् । ‘जस्तो खेल्नुपर्ने त्यस्तो भएन । यो तयारी हो, अब छनोटमा राम्रो गर्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ सिस्टममा धेरैलाई खेल्न गाह्रो भएको छ । प्रशिक्षक पनि ढिला आएकोले सिक्न समय लागिरहेको छ । स्तर राम्रो हुन्छ । तर धेरै जुनियरसँग खेल्दा उनीहरूले कस्तो खेल्छन् भन्ने अझै थाहा पाइएको छैन । त्यसैले गाह्रो भइरहेको छ ।’
बंगलादेशी प्रशिक्षक गोलाम रोब्बानिचोतानले आफ्ना खेलाडीको प्रशंसा गर्दै भने, ‘नेपाल राम्रो टिम हो । हाम्रा खेलाडीले ९० मिनेट नै राम्रो खेले । धेरै समय सँगै खेलेको, एकेडेमीमा रहेकोले हाम्रो टिमको समन्वय राम्रो भयो । धेरै राम्रो खेल्यौं । अब एसियन छनोटमा जोर्डनलाई निशाना बनाउनेछौं ।’ बंगलादेशी टिम पनि काठमाडौंबाटै उज्वेकिस्तान प्रस्थान गर्नेछ, जहाँ उसले जोर्डन र इरानविरुद्ध खल्नेछ । समूहविजेता टिमले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ ०६:५४